'The Rings of the Ring' တွင်ကိုယ်ပိုင်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများရှိနိုင်သည် Gadget သတင်း
'Lord of the Rings' တွင်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲရှိနိုင်သည်
Ruben gallardo | | အမေဇုံ, ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး
မတူညီသောဗွီဒီယို ၀ ယ်လိုအားပလက်ဖောင်းများရောက်ရှိလာချိန် မှစ၍ streaming များ- ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနေအိမ်များ။ အိမ်တွင်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများသည်လက်ခံနိုင်သောအမြန်နှုန်းရှိခြင်းကြောင့်အကြောင်းအရာများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အရည်အသွေးဖြင့်ပြသနိုင်ခြင်းကြောင့်တီဗီစီးရီးများသည်အာရုံခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ လိုခေါင်းစဉ်များ "Game of Thrones", "The Walking Dead" (သို့) "Stranger Things" ဆိုတာကမင်းတို့ပြောခဲ့တာတွေထဲကအကောင်းဆုံးဥပမာတွေပါ။.
သို့သော်ဤကဏ္inတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသောဇာတ်ကောင်များ - အခြားနည်းလမ်းများ - ရှိပြီးသားဖြစ်သည်မှာမှန်ပါသည်။ Netflix, HBO, Movistar + နှင့် Amazon တို့ကဲ့သို့ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏ Prime Video service ကိုအကြီးအကျယ်လောင်းချင်သည်။ Jeff Bezos ကုမ္ပဏီသည် Game of Thrones ကို၎င်း၏ခါးပတ်အောက်တွင်ထားလိုသည်ကိုလူသိများသည်။ Y ဆရာ JRR Tolkien ၏ပုံပြင်များသို့ပြောင်းလဲရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်း.
ထုတ်ဝေမှုအရသိရသည် အမျိုးမျိုး, အမေဇုံစတူဒီယိုများ၊ Warner Bros Television နှင့် Tolkien ၏အိမ်ခြံမြေများသည်လက်ရှိတွင်ဆွေးနွေးနေကြသည်။။ HBO နှင့် Netflix ကဲ့သို့သောအမည်များသည်တံဆိပ်မှုတ်သော်လည်းအမှန်မှာ၊ Bezos သည်လေလံဆွဲရာတွင်ကောင်းစွာ ၀ င်ရောက်နေပြီး၎င်းတို့သည်ယခုအချိန်တွင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဘီဇို့စ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေပုံရသည်။ Amazon ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကသူ၏ဗွီဒီယိုဌာနခွဲကိုကမ္ဘာတစ် ၀ န်းပိုမိုအာရုံစိုက်စေရန်ခေါင်းစဉ်များလောင်းရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Game of Thrones နှင့်ဆင်တူသည်။ Y "The of the Rings" သည်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကြီးမားသည်။ သင်ရုံ Warner Bros နှင့်စျေးကွက်ပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောစာအုပ်များရဲ့ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေနှစ် ဦး စလုံး၏လူကြိုက်များကြည့်ရှုရန်ရှိသည် - သူတို့စိတ်ကူးယဉ်စာပေအတွက်အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်ကြသည်။
ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, သဘောတူညီချက်အချိန်အတွင်းရောက်ရှိလိမ့်မည် ဆွေးနွေးပွဲဟာသူတို့ရဲ့နို့စို့အရွယ်၌ရှိကြ၏။ နှင့် Tolkien ရဲ့အမွေဆက်ခံသူများကချမှတ်ထားသည့်မူပိုင်ခွင့်ပမာဏနိုင်ပါတယ် ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀-၂၅၀.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး » 'Lord of the Rings' တွင်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲရှိနိုင်သည်
ယခုတွင်သင်သည် Bixby ခလုတ်ကိုလုံးဝပိတ်နိုင်သည်